नरसिंहमा आयो बाढी, वस्ती डुवानमा - inaruwaonline.com
नरसिंहमा आयो बाढी, वस्ती डुवानमा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २५, २०७७ समय: १९:०६:४८
इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको नरसिंहमा सुनसरी खोलाको बाढी आएको छ । खोलाको बाढी वर्षौनी नरसिंहमा पस्दा यहाँका स्थानीय जनताहरु रातभर बाढीको त्रासका कारण जाग्राम समेत बस्ने गरेको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड नंं. ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र यादवले जानकारी दिएको छ।
यादवका अनुसार भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड ७ मा सुनसरी खोलको बाढीले लगभग एक सय भन्दा बढी घरपरिवार बाढी बाट प्रभावित भएका छन् । बाढीको कहरले प्रकृतिक संरचना देखी भगौलीक संरचना सम्म प्रभावित भएका छन्। साथैँ भोक्राहा नरसिंह गापा वार्ड नं. ५, को राम बस्ती वार्ड ७ को रामजानकी मन्दिर उत्तर मण्डल टोलको दर्जनौँ घरपरिवार बाढी बाट प्रभावित भएका छन् ।
भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र ंसंघिय सरकारले सुनसरी खोलाको प्राकृतिक प्रकोप , बाढीले स्थानीय जनता पटक पटक प्रत्यक्ष रुपमा पीडित बनेपनि जनप्रतिनिधिहरुले यावत समस्या माथी कुनै चासो नादेखाएको स्थानीय जनताहरुको गुनासो छ । यसका साथै वर्तमान स्थितीले पनि यही प्रमाणित हुन्छ । बाढीको कारणले भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–५ राम बस्ती, नरसिंहको दलित बस्ती डुबानमा परेको छ । नरसिंहको राम टोल, दास टोल र सुकुम्बासी टोलका गरी तीन सय घर परिवार भन्दाबढी डुबानको चपेटामा परेका छन् । केहीलाई घरमा भान्सा गर्ने अवस्थासमेत नरहेको स्थानीय चन्दन मरवैताले बताए ।